Nagarik News - एनआरएन डेनमार्कमा चुनावी चटारो
Monday9Shrawn, 2074 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	प्रवास	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / प्रवास / एनआरएन डेनमार्कमा चुनावी चटारो
एनआरएन डेनमार्कमा चुनावी चटारो	11 Jul 2013 | 18:47pm बिहीबार २७ असार, २०७०
शशि ढकाल Be the first to comment! 12345 (0 votes)
कोपनहेगन (डेनमार्क)- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) डेनमार्कले तेस्रो अधिवेशन र चुनाव घोषणा गरेलगत्तै यहाँ रहेका नेपालीलाई चुनावी चटारोले छोएको छ। न्यानो मौसममा हुने 'बीच पार्टी' र पिकनिक पनि मनोरन्जनभन्दा बढी चुनाव लक्षित हुन थालेका छन्। नेतृत्वका लागि सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहे पनि त्यो सार्थक नहुने देखिएको छ। निर्वाचन कमिटी गठन हुनासाथ विवादको घेरामा तानिएको छ। एनआरएन स्वतन्त्र संस्था भए पनि यसमा विभिन्न दलका विदेशस्थित भ्रातृसंस्थाका कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ। दलसम्बद्ध भ्रातृसंस्थाले चुनावका लागि आ–आफ्ना प्यानल मैदानमा उतारिसकेका छन्। यसको विरोधमा सामाजिक संजालहरुमार्फत् प्रतिक्रिया आउने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। डेनमार्कमा अध्यनरत प्रभात किरण आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्छन्, 'एनआरएन डेनमार्कको साधारणसभा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक खिचातानीको दुर्गन्ध सामाजिक सञ्जालहरुमा गन्हाउन थालेको छ। कुनै राजनीतिक पार्टीको भ्रातृसंस्थाका माइन्युटबाट अनुमोदित उम्मेदवारको भन्डाफोर गरौं। एनआरएनलाई सबै नेपालीको प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउन सबैले आआफ्नो ठाँउबाट सक्दो पहल गरौं।'सर्जक पूर्ण बन्धनले आफ्नो वालमा 'विश्वभरि नै एनआरएनमा राजनीतिक घुसपैठ हुनुहुन्न भन्ने आवाज ज्वलन्त भइरहेका बेला, एनआरएन डेनमार्कको पदाधिकारी चयनको क्रम नजिकिँदै गर्दा यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ कि हुन्न? सुनिँदैछ, राजनीतिक खिचातानी लागेका छन् रे डेनमार्कवासी नेपालीहरु एनआरएनको नयाँ चुनावका लागि पनि। राजनीतिक परिधीबाट टाढा रहेर पनि, के नेपाल र नेपालीको लागि मात्र सोच्न सकिँदैन र?' लेखेका छन्। डेनमार्कको नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्चले निर्वाचन कमिटीमा आफ्नो प्रतिनिधि नपरेको बिरोधमा फेसबुक वालमै असन्तुष्टि जनाएको छ। 'एनआरएन विशुद्ध गैरराजनीतिक संस्था हुँदाहुँदै पनि यसले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने, अनि आग्रह पूर्वाग्रह साँधेर कुनै एक पक्षलाई निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै पेलेर जाने नीति अबलम्बन गर्ने हो भने निर्वाचन र यसको परिणामको निष्पक्षतामा कसरी विश्वाश गर्ने?' मञ्चको वालमा छ। विगतमा डेनमार्क एनआरएनमा पार्टीगत भागबन्डालाई सहमतिको नाम दिएर चुनाव नगरी मिलाउने चलन थियो। यसपाली पनि यस्तै भागबन्डा हुने ठानेर अध्यक्षमा मात्र ६ जना प्रतिस्पर्धी देखा परिसकेका छन्। यसअघि सहमतिबाट अध्यइ बनेका मोहन मिश्र आफ्नो कार्यकालमा अपेक्षा गरे बमोजिम जिम्मेवार पदमा बस्नेबाटै सहयोग नभएको गुनासो बारम्बार गर्छन्। 'टिमले हो काम गर्ने टिम नै छ्यासमिसे भएपछि कसरी काम गर्नु?' उनले भने। कांग्रेस समर्थक मिश्र अध्यक्ष रहेको एनआरएन डेनमार्कको महासचिव नेकपा एमाले पार्टी कमिटी डेनमार्कका कृष्ण पौडेल छन्। Tweet प्रतिक्रिया
प्रवास	धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई युकेबाट २० लाख रुपैयाँलन्डन—धुर्मुस सन्तुली फाउन्डेसनलाई हेल्प नेपाल फाउन्डेसनले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। हेल्प नेपालले बुधबार...	युरोपमा महजोडीको 'बाहुनबहादुर' र 'नेवारबहादुर' प्रस्तुतिडेनमार्क—मह जोडीको साथमा नर्वेबाट शुरु भएको दुई महिने मह सांगीतिक एवम् साँस्कृतिक युरोप यात्रा युरोपका विभिन्न...	कर्णेल लामा मुद्दामा राउत र हुसैनको बयान सुरुकाठमाडौं/लन्डन- यातना दिएको अभियोगमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारअर्न्तगत युद्ध अपराध अभियोगमा बेलायतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार...	धुर्मुस सुन्तलीको अभियानलाई वी फर अलको ६८ हजारटोकियो – सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौरमा निर्माण हुन लागेको धुर्मुस सुन्तली दोस्रो एकिकृत नमुना बस्ती निर्माणको लागि जापानस्थित...	भर्खरै...